Madaxweynaha Puntland oo si diiran loogu soo dhaweeyay Addis Ababa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo si diiran loogu soo dhaweeyay Addis Ababa
November 20, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Roog Casaan ah oo la fidiyay si loogu soo dhaweeyay Madaxweynaha Puntland oo galabta gaaray Addis Ababa. [Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada]
Addis Aababa-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa galabta oo Isniin ah.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee Addis Aababa kusoo dhaweeyay Wasiirka Arrimaha Dibada Itoobiya Workneg Gobeyehu.
Madaxweynaha Puntland ayaa maanta u safray dalka Itoobiya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay Raysulwasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn.
Kahor intii uusan ka tagin Garoowe, Cabdiweli ayaa sheegay in wadahadalo la yeelan doono masuuliyiinta sare ee Itoobiya.
November 20, 2017 Madaxweynaha dowladda Puntand oo u safray dalka Itoobiya
Madaxweynaha dowladda Puntand oo u safray dalka Itoobiya
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s National Intelligence and Security Agency (NISA) has arrested the mastermind of the Al-Shabab attack at Mogadishu port earlier this month. NISA commander of Banadir region Mohamed Hassan Faran-fir said, as cited by [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Toban maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay Soomaaliya labadii maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegeen ciidamada Mareykanku. Axadii, duqeyn ka dhacday deegaanka Dheerow Sanle ee gobolka Shabeellaha Hoose [...]